Ubusuku obuhle bonyaka omusha ... Mhlawumbe | Martech Zone
Ubusuku obuhle bonyaka omusha… Mhlawumbe
NgeSonto, uDisemba 31, i-2006 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Namuhla ntambama ngilangazelele ukuchitha usuku olwandulela unyaka omusha nabangane abakhulu, uBill noCarla. Sizodlala ezinye ICranium imidlalo, bukela amanye amavidiyo, futhi uphumule ngenkathi sisalinde u-2007 ukuthi angene ngokuthula futhi (ngethemba) ngokuthula.
QAPHELA: Ngangike ngabhala phambilini ngobudlelwano bebhizinisi obuyinselele engabufaka nenye i-blogger. Ngokucela kwabanye abafundi, ngizogcina lokhu okuthunyelwe okuyingxenye. Ngokujabulisayo, sisebenza ngezinkinga ezisasele.
Imihlahlandlela yabaqalayo ku-SQL Injection ne-Cross-Site Scripting
Jan 2, 2007 ngo-9: 03 PM
Jan 4, 2007 ku-7: 51 AM
Ngiyajabula ukuthi lokhu kuyasetshenzwa. Ngabona okuthunyelwe kwasekuqaleni, futhi ngangikhathazeke kakhulu ngawe. Njengoba ngisanda kukhala ngokushona komlingani wami (sasihlukene kodwa singabangane abakhulu) NGINGAQINISEKISA ukuhlobana neHoliday Blues.
Imayini inenothi elijabulisayo, futhi. Wayewuthanda uKhisimusi, kodwa impilo yakhe yayimvimbele ukuthi “ayenze kahle” eminyakeni embalwa edlule. Ngiyaduduzeka ngokwazi ukuthi usenokhisimuzi omuhle kakhulu okwamanje.